By administrator on	 September 27, 2020 देश, फोटो फिचर, वातावरण, स्थानीय, स्वास्थ्य/जीवनशैली/यौन
पबित्रा पराजुली, असोज ११ । अमरापुरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो २१ औ वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर कोभिड–१९ न्युनिकरणका लागि खानेपानी उपभोक्ता समितिको भुमिका विषयक एकदिवसीय गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी जिल्ला खानेपानी ईकाइ कावासोतीका प्रमुख महेन्द्र आचार्यले अमरापुरी खानेपानी सरकारको अमुल्य गहना रहेको बताउनुभयो । उहाँले संस्थाले आफना उपभोक्तालाई शुद्ध पानी वितरण गर्न सफल भएको र आगामी दिनमा पनि यसरी नै अगाडी बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष गोपि कंडेलले धेरै चुनौतीका बाबजुद् पनि अमरापुरी खानेपानी संस्थाले उपभोक्तालाई शुद्ध पानी वितरण गर्न सफल भएको बताउँदै खानेपानीको मुहानमा रहेको अव्यवस्थित ईन्टेकलाई व्यवस्थित गरिएको, बालुवा धुने मेसिन संस्थामा जडान गरिएको लगायतका धेरै काम संस्थाले गरेको अध्यक्ष कंडेलले जानकारी दिनुभयो ।
उपभोक्ताको सेवा सुविधालाई ध्यानमा राख्दै संस्थाले प्रविधि मैत्री बनाउदै लगिएको उहाँले बताउनुभयो । संस्थामा भएगरेका कामलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनका लागी संस्थाको विभिन्न स्थानमा सिसिटिभी जडान गरेको अध्यक्ष कंडेलले बताउनुभयो । साथै उहाँले संस्थाले शुद्ध पानी वितरणमा कुनैपनि सम्झौता नगरेको पनि दावी गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै अमरापुरी स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख टुकराज सुवेदीले खानेपानी र स्वास्थ्य चौकीको समन्वयमा कसरी सुरक्षित रहने ? के गर्ने ? कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रम बोल्दै संस्थाका भुतपूर्व अध्यक्ष तथा वर्तमान सल्लाहकार समिति सदस्य भवानीप्रसाद पौडेलले निकै संघर्षपछि अमरापुरी खानेपानी यो स्थानमा आएको र आगामी दिनमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । साथै उहाँले कोभीड–१९ बाट बच्न सर्वप्रथम व्यक्तिले सरसफाईमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै गैँडाकोट १४ की वडा अध्यक्ष कोकीसरा राना मगरले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । यसका लागि वडाले सहयोग गर्न परेपनि वडा सधैं तयार रहेको उहाँको भनाइ छ ।
समाजसेवी दशरथ तिवारीले पानी शुद्धीकरणको बिषयमा खानेपानी संस्थाले उपभोक्ताको घरघरमा गएर अनुगमन गर्न र खानेपानी शुद्धीकरण सम्बन्धमा उपभोक्तालाई तालिम दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । समाजसेवी खेमप्रसाद सापकोटाले खानेपानी संस्थाले यो गर यो नगर भन्दा पनि व्यक्ति आँफै सचेत र सुरक्षाको बिषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । समाजसेवी तेजेन्द्रप्रसाद सापकोटाले सुरक्षित पानीमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । समाजसेवी दाताराम पाण्डेले समुदायका सबै व्यक्तिको सहयोगले नै संस्थाले उन्नती गर्ने बताउँदै उपभोक्तलाई पनि संस्थाले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
संस्थाका सचिव हिरालाल सापकोटाले संचालन गर्नुभएको कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य संस्थाकी उपाध्यक्ष लालमाया गुरुङले राख्नुभएको थियो ।